မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 447
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၂၂၀၀၈ ခုနှစ်က အီရတ်တွင် တွေ့ရသော David Petraeus (ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်) နှင့် အိုဘားမား (ထိုစဉ်က လွှတ်တော်အမတ်) ပထမ အမေရိကန်က နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိများကို မြန်မာပြည်သို့ အဆက်မပြတ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လွှတ်တော်အမတ်များ နှင့် ဟီလာရီကလင်တန်တို့ နေပြည်တော်သို့ သီးခြားစီ သွားရောက်ကြသည်။ ယခု အမေရိကန်အစိုးရက စေလွှတ်မည့်သူမှာ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ စီအိုင်အေ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် No tags for this post. Related posts No related posts.
Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသော သူရဦးရွှေမန်း (ဓာတ်ပုံ-MNA) ၀န်ထမ်းများ၏ လစာကို လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မဖြစ်မနေတိုးမြှင့်ပေးရေး၊ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 447 of 448«1...444445446447448»